ငါးအသားလွှာ ကင်ပွန်းချက် ~ စန္ဒကူး
စားချင်စရာလေးဟယ်။ နံနံပင်လေးက ဘာလေးနဲ့တူမှန်းမသိဘူး။ နံနံပင်ရုပ်မထွက်သေးဘူး :)
ဟုတ်ပါ့နော်.. တစ်ရွက်နှစ်ရွက် သာ ကြီးသေးတာ.. အပင်ပေါက်လေးတွေ.. ဟီးးးဟီးး
တူနေပြီ... ငါးဟင်းလေးစားချင်လို.ဈေးသွားတိုင်း ငါးတွေကမျက်လုံးပြူးနဲ့ကြည့်ကြည့်နေတာမို.တခြားချက်စရာပဲ ဝယ်ပြီးပြန်ဖြစ်တယ် ။
မမလုလည်း အဲ့ဒီလို ချဉ်ရည်ဟင်းတွေဆို သိပ်ကြိုက်တာ။ ဘောစကိုင်းရွက်နုလေးတွေနဲ့ တို့စားရရင်အမိုက်ပဲ။
1. ငါးကြက်လောက်= ငါး၊ကြက်သား၊လောက်ကောင် or ငါးကျက်ခါနီး??
2. ဂျင်း တစ်ပြားရိုက် = ဂျင်းကိုတပြားတည်းရိုက်ထည့် or ဂျင်းဒါးပြားရိုက်???